Habka aad u Gacan Qaado Dadka Waxay ka Turjumaysaa Heerka Caafimaad iyo Awood Ahaaneed ee Qofka – Xeernews24
Habka aad u Gacan Qaado Dadka Waxay ka Turjumaysaa Heerka Caafimaad iyo Awood Ahaaneed ee Qofka
7. Oktober 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Inta badan waxa loo arkaa calaamad kalsooni muujisa salaanta xoogan, balse sidoo kale waxay ka turjuntaa caafimaadka shakhsi ahaaneed ee qofka.
Tiro badan oo dhakhaatiirta adduunka ah iyo saynisyahanno ah waxa ay aaminsan yihiin in hannaanka gacan qaad ee qofku sida uu yahay ay ka turjunto hadba heerka uu awood jidh ahaaneed iyo mid da’ ahaaneed ba ka taagan yahay.
Sidoo kale, daraasado badan oo la sameeyey waxa ay bedka soo dhigeen in ragga iyo dumarka gacan-qaadkoodu xooggan yahay ay yihiin kuwo aad u awood badan, marka loo eego kuwa aadka u gacan-qaadka jilicsan, gaar ahaan cilmi-baadhis Ingiriiska laga sameeyey waxay muujisay in dadka gacan-qaadkoodu diciifka yahay ay 70% caafimaadkoodu hooseeyo, marka loo eego kuwa salaantooda gacan-qaadka ah xooggan tahay. Waxa ay intaa daraasadu ku dartay in xataa gacan qaadka jilicsan ay muujiso da’da iyo xoogganaanta lab amma dhedig ee awoodda.
Cilmi-baadhis kale, ayaa laf ahaanteedu sheegtay in salaanta gacan-qaad ee xooggan ee qofku ay ka mara kacdo inuu yahay qof dheelitiran caafimaad ahaan iyo jidh ahaan, halka haddii salaantiisa gacan-qaad ay dabacsan tahayna ay astaan u noqon karto dhiig kar iyo xannuuno kale oo qofka haya, sababtoo ah xoogganaanta muruqyadu waxa ay astaan yihiin caafimaad qabka guud ee qofka, kuwa daciifka ahna waa kuwo bukaan ah, haddii muruqyadu diciifana aad bay u adag tahay in dib awoodooda loo soo celiyo.
Daraasadii ugu dambaysay oo lagu cabiray 11,000 qof oo Jarmal ah oo da’ walba leh, kuwaasoo lagu tijaabiyey in ay sameeyaan salaam gacan-qaad oo caafimaa qab ka muuqdo iy mid aan caafimaad ka muuqan, iyadoo waliba dherarka qofka lagu xisaabtamaayey, waxaana lagu ogaaday in xoogga dadku sii kordho marka ay ku jiraan da’da 30aad iyo 40aadka, kadibna wixii ka dambeeyana ay hoos u dhac sameeyaan.
Daraasadan oo lagu daabacay wargeyska PLOS ONE, waxa lagu ogaaday in dadka Jarmalku xagga salaam ahaan ka xooggan yihiin dadka Ingiriiska a, halka Ingiriiskuna ka awood badan yahay xagga gacan qaadka salaanta dadka Jabbaan u dhashay (Japanese).
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/images-3.jpg 176 286 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-07 16:38:182016-10-07 16:38:18Habka aad u Gacan Qaado Dadka Waxay ka Turjumaysaa Heerka Caafimaad iyo Awood Ahaaneed ee Qofka
Puntland iyo Galmudug oo Fooda is daray Ujeedada Shir-doceedyo Kooxo Ka Kala Socda Somaliland Iyo Soomaaliya Ku Dhex...